प्रधानमन्त्रीज्यू सर्वेन्द्र खनाल र महेश बस्नेतलाई के पुरस्कार दिने ?:: Mero Desh
प्रधानमन्त्रीज्यू सर्वेन्द्र खनाल र महेश बस्नेतलाई के पुरस्कार दिने ?
Published on: ११ बैशाख २०७७, बिहीबार ०९:०२
काठमाडौं । देशमा अहिले कोरोना भाइरसको ‘ट्रेसिङ’ अर्थात् खोजी चलिरहेको छ । सिङ्गै देश लकडाउनमा छ । यहीबेला बुधबार दिउँसो पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत (भक्तपुर) र किसान श्रेष्ठ (तनहुँ) जनकपुरधाममा डा. सुरेन्द्र यादवलाई
खोज्नतिर लागे ।कोरोनासँग लड्नका लागि डाक्टर यादवको खोजी भएको होइन । खनाल, बस्नेत र श्रेष्ठ ‘राजनीतिक भाइरस’ले पोलेर डाक्टर खोज्नतिर लागेका हुन्। बुधबार बिहान ११ बजेतिर उनीहरूले समाजवादी पार्टीका सांसद डा. यादवलाई ट्रेसिङ गर्न सफल भए । सफल नहुन् पनि कसरी, पूर्वआइजी सर्वेन्द्र ‘खतरा कमाण्डर’ मानिन्थे प्रहरी संगठनमा हुँदा ।रातारात उठाएर काठमाडौं ल्याइएका सांसद यादव भन्छन्, ‘हामीसँग पनि पीएसओ थियो । पीएसओबाट पनि लोकेसन ट्रेस भइहाल्छ । म यहाँ छैन भन्न पनि मिलेन । मेरो मोबाइल आफ्नै गाडीमा छुटेको थियो, घरमा खबर थिएन । म जनकपुरका लागि निस्केको थिएँ । सर्वेन्द्र, महेश र किसानले आफूलाई काठमाडौं लैजाने गरी भेट्न आएको सांसद यादवले आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनकपुरबाटै जानकारी गराएका थिए ।डा. यादव भन्छन्, ‘मैले यहाँ काठमाडौंमा आइसकेपछि बुझेँ कि यस्तो-यस्तो कुरा छ । उहाँहरूको त्यस्तो किडन्यापै गर्नेजस्तो त थिएन । तर, लकडाउनका बेलामा मेरो काठमाडौं आउने विचार थिएन ।
प्रधानमन्त्रीकै नाम लिएर खनाल, बस्नेत र श्रेष्ठले समाजवादी पार्टी फुटाउने कार्यमा सक्रियता देखाएका थिए र त्यसैका लागि उनीहरूलाई थप एकजना सांसद चाहिएको थियो ।डा. यादव भन्छन्, ‘त्योबेलामा मलाई केही थाहा थिएन । बाटोमा आउँदा उहाँहरूले अहिलेको बेलामा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो । उहाँहरूले अध्यादेश त ल्याउनुभयो, अध्यादेशबारे जुन कुराहरू उठ्यो, त्यसबाट उहाँहरूले म्यानेज गर्न खोजेको मलाई आभास भयो ।’यो राजनीतिक घटनामा केपी ओलीका दायाँ हात मानिने नेकपाका सांसदहरू संलग्न हुनु त आश्चर्यजनक होइन तर पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालकै संलग्नताचाहिँ आश्चर्यजनक हो । खनालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुसी पार्नका लागि यस्तो अराजनीतिक धन्दामा संलग्नता देखाएको बुझ्न गाह्रो छैन।सांसद यादव भन्छन्, ‘एकचोटि प्रधानमन्त्रीजीले भेट्न चाहनुभएको छ भनेर भन्नुभएको थियो आइजीपी साहेबले ।लकडाउनपछि आएर भेट्छु भन्ने सोचेको थिएँ । तर, उहाँहरू अचानक पुग्नुभयो ।
गाउँ नजिकमा आएर फोन गरेपछि हाम्रो संस्कारले त नआउनू भन्न मिल्दैन । काठमाडौं आउँदा मनसाय बुझेपछि म आफैँ पनि पन्सिइहालेँ ।’यो घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राजनीतिमा ओली अपराध कर्मसमेत गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने आशंका यो घटनाले जन्माएको छ ।आफूसित सरोकारै नभएको अन्य दलको सांसदलाई लकडाउनका बेला घरमा फोन गर्न पनि नदिई नियन्त्रणमा लिने सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठलाई अब मन्त्री बनाएर पुरस्कार दिने कि कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ?अनि, राजनीतिको घीनलाग्दो खेलमा इमान्दार सिपाही भएर लागेबापत पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई पनि कुनै नियुक्तिको पुरस्कार पो दिने हो कि ?होइन भने, तीनैजनामाथि कानुनी कारबाहीको आवश्यकता देखिएको छ ।
यो घटना अपहरणकै शैलीमा भएको देखिन्छ । यदि ‘अपहरण’ नै होइन भने पनि अरूको दल फुटाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गरिएको अपराध कर्मचाहिँ पक्कै हो ।‘प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको’ भन्दै रातारात काठमाडौं ल्याउनु र स्वयं प्रधानमन्त्रीले फोनमा भोलि बिहान बालुवाटारमा भेटौँ भन्नुले यो घटनामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नताको दाबीलाई बल पुर्‍याउँछ ।